Lets change the world, one poem atatime | Dorothy Oger | TEDxSaxionUniversity - Poet Itralestelle
Reviewer: Myo Aung နေ့ရက်တိုင်း၊ စက္ကန့်တိုင်း ချစ်ခြင်းအတွက် သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ အင်္ဂါနေ့၊ မတ်လ ၂၂ ရက် ၂၀၁၆ မှာ Brussels မြေအောက်ရထားဘူတာမှာ
ဗုံးတစ်လုံး ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Johan
ပျောက်ဆုံးသွားတယ်။ မျက်ကန်း အကြမ်းဖက်ရဲ့ ဂယက်တွေရဲ့
တိုက်ခိုက်တာခံလိုက်ရတာပါ။ နေ့ရောညပါတိုင်အောင် တူညီတဲ့ မေးခွန်းဟောင်းတစ်ခုနဲ့
ကျွန်မ စစ်ခင်းပါတယ်။ ဘာလို့များ ကျွန်မတို့မှာ ဒီလောက် အမုန်းက
ရှိနေသေးရလဲဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးကြလား။ ဘာလို့ သဘောထားသေးမှုက စာနာမှုကို
အနိုင်ယူတာလဲ။ ဘာလို့ ကျွန်မတို့ အချင်းချင်း
တိုက်ခိုက်နေတာလဲ။ ဒါကို ဖွင့်မပြောတာအတွက်
မရှက်မိဘူးလာ။ ဘာပြောဖို့လိုလဲ၊ ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲ။ အကြမ်းဖက်မှုကို ဘယ်လို အနိုင်ယူနိုင်လဲ။ ဒါအားလုံးကို အဓိပ္ပါယ်ရှိအောင်
ဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲ။ ဒီခံစားချက်တွေကို ဘယ်လို
ဖော်ထုတ်မလဲ။ ကျွန်မရဲ့နည်းကတော့ ကဗျာရေးဖို့ပါ။ ဒီတော့ မနက်မှာ ပထမဆုံးအရာက
ကျွန်မ ကဗျာ ရေးရမှာပါ။ ပြီးတော့ ပူဆွေးနေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့
ကဗျာကို မျှဝေတယ်။ ဒါက သူတို့နဲ့ ဟိန်းသွားတယ်။ ဒါနဲ့ သူတို့က အွန်လိုင်းမှာတင်ဖို့
ကျွန်မကိုပြောတယ်။ မွန်းမတည့်ခင်မှာ ကဗျာကို ပထမဆုံးအဖြစ်
မျှဝေလိုက်တယ်။ ဂယက်သစ်တစ်ခု စတင်ရင်းနဲ့ ပထမ ခြောက်လမှာ လူမှုရေး မီဒီယာက
တစ်ဦးချင်းသုံးသူ ၈၀၀၀၀ ဆီ ရောက်သွားမယ်။ ဒီနောက် Ilaria က သူမရဲ့ အီတာလျံ ဘာသာပြန်
ကဗျာကို ပို့ပေးတယ်။ သူမက သူမရဲ့ မိခင်ဘာသာစကားနဲ့
ဒါကို ကြားဖို့လိုတယ်တဲ့။ နောက် များစွာသော အထောက်ကူပြုမှုတွေ၊ များစွာသော အနုပညာဆန်တဲ့
ပြန်ဆိုခြင်းတွေ များနိုင်သမျှ များများရအောင် ဖိတ်ကြားဖို့
ကျွန်မရဲ့ ခွင့်ပြုချက်တောင်းတယ်။ ကျွန်မဟာ ကဗျာနဲ့ ၎င်းရဲ့ သတင်းစကားကို
ထောက်ပံ့ဖို့ ရိုကျိုးက ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒီညက တရုတ်ဘာသာပြန်ရတယ်။ ဘာသာပြန် နံပါတ် ၉ တောင် ဖြစ်နှင့်ပြီ။ နောက်မနက်မှာ Brian ဆီက
အီးမေးလ်ရတယ်။ ကဗျာကို သူက သီချင်းလုပ်ထားတယ်ဆိုတာပါ။ တိုက်ခိုက်မှုတွေအပြီး တတိယ မနက်မှာတော့ ကျွန်မ မိတ်ဆွေ Johan ဟာ ပေါက်ကွဲမှုမှာ သေပြီလို့
အတည်ပြုချက်ရပါတယ်။ ကျွန်မ ငိုနေမိပြီး သီချင်းကိုပါ နားထောင်နေတယ်၊ ငိုနေလိုက် သီချင်းနားထောင် နေလိုက်ပေါ့။ ပုံစံသစ်တိုင်းဟာ ကျွန်မကို နက်ရှိုင်းတဲ့
ကုစားမှု ဖြစ်စေပါတယ်။ မျှဝေမှုတိုင်း၊တုံ့ပြန်မှုတိုင်း၊
ပေးဝေမှုတိုင်းဟာ ကျွန်မကို တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့
စေ့စပ်ပေးပါတယ်။ ယနေ့မှာ ကျွန်မမျက်ရည်တွေက အလင်းနဲ့ ချစ်ခြင်းနဲ့၊ ပီတိနဲ့တောင် ပြည့်နေပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီနေ့ဆို ရှစ်လတာမှာ
နောက်ထပ် ပြန်ဆိုချက် ၅၇ ရှိပါတယ် ကျွန်မရဲ့ အသံက နေရာတိုင်းကို
ခရီးနှင်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ကဗျာတွေနဲ့ တိုက်အားလုံးမှာ
ခြေချဖို့အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရင်း ပုံမှန် အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ဒတချ်ထက် အခြားဘာသားစကားတွေဆီ ကဗျာတွေ
ရောက်အောင်ဖန်တီးရင်းပါ။ စာရေးခြင်းကိုလုပ်တာ ၃၇ နှစ်ကြာပြီဆိုတော့ ကဗျာစာပေကနေ ချစ်ခြင်းအတွက်
ရပ်တည်တယ်ဆိုတာက ကျွန်မဘယ်သူဆိုတာပါ။ စကားလုံးတွေကနေ ဟိန်းသံကို ကျွန်မရှာတယ်။ ဒီကဗျာက ဟိန်းထွက်လာတော့ စိတ်ချမ်းမြေ့ရပါတယ်။ ရှင်သန်မှုကို ခံစားရပါတယ်။ ချစ်ခြင်းအတွက်"ကို ရှင်တို့နဲ့
မျှဝေရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ချစ်ခြင်းအတွက် ကိုယ်ရပ်တည်မယ်၊ ကြေကွဲနေတဲ့ စိတ်ဝိဉာဉ်တစ်ခုနဲ့တောင်၊ လေးလံတဲ့ နှလုံးသားတစ်ခုနဲ့တောင်ပါ။ ချစ်ခြင်းအတွက် ကိုယ်ရပ်တည်မယ်၊ ကမ္ဘာကြီးက ဒဏ်ရာရနေလို့ပါ။ ကိုယ့်တိုင်းပြည် သေးသေးလေးပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး၊ နေရာတိုင်း၊
နေ့တိုင်းပါ။ ချစ်ခြင်းအတွက် ကိုယ်ရပ်တည်မယ်၊ ကိုယ်တို့ အလင်းရောင် ပိုလိုအပ်လို့ပါ၊ သေဆုံးခြင်းတွေ မရှိပါနဲ့တော့၊
အာဏာတွေ မရှိပါနဲ့တော့၊ ဗုံးလက်နက်တွေ မရှိပါနဲ့တော့။ ချစ်ခြင်းအတွက် ကိုယ်ရပ်တည်မယ်၊ ကိုယ်တို့ ကလေးတွေ ဘေးကင်းစေဖို့၊ ကိုယ်တို့မိတ်ဆွေတွေ ခိုလှုံရာရဖို့၊ ကိုယ်တို့ နယ်ခြားတွေ ပွင့်လာစေဖို့ပါ။ ချစ်ခြင်းအတွက် ကိုယ်ရပ်တည်မယ်၊ ကြေကွဲနေတဲ့ စိတ်ဝိဉာဉ်တစ်ခုနဲ့တောင်၊ လေးလံတဲ့ နှလုံးသားတစ်ခုနဲ့တောင်ပါ။ (လက်ခုပ်သံများ) ချစ်ခြင်းရဲ့ ဂယက်တွေနဲ့
တို့ထိခံရတဲ့အခါ ကျွန်မတို့ ကမ္ဘာကြီးကို
ငြိမ်းချမ်းမှုပေးတာပါ။ တစ်ကြိမ်မှာ ကဗျာတစ်ပုဒ်၊
လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု၊ ဘာသာစကားတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်ပဲ Saxion University
ကျောင်းသားတွေကို နွေးထွေးစွာ မိတ်ဆက်ပေးရတာ
ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ကဗျာကို သူတို့ရဲ့ မိခင်ဘာသာနဲ့
မျှဝေဖို့ ရဲရင့်၊ ရက်ရောသူတွေပါ။ (လက်ခုပ်သံများ) ( ပြင်သစ်ဘာသာပြန်) (ဗီယက်နမ်ဘာသာပြန်) (ဘရာဇီး၊ ပေါ်တူဂီ ဘာသာပြန်) (တရုတ် ဘာသာပြန်) (ဟန်ဂေရီ ဘာသာပြန်) (ရိုမေးနီးယန်း ဘာသာပြန်) (လက်ခုပ်သံများ)
Posted in ArticlesTagged Emotions, English, entertainment, language, love, Netherlands, poetry, TEDxTalks, Terrorism, war
4 thoughts on “Lets change the world, one poem atatime | Dorothy Oger | TEDxSaxionUniversity”
Vrij van Pijn May 18, 2019
Thank you again Dorothy. So moving and strong xxx
Jeffer London May 18, 2019
One moment of truth,
a bell rings at first alone,
then ripples echo
Robert Vilkelis May 18, 2019
It's amazing to see how far we've come – and it all started with the single brave act of catalysing your feelings into poetry.
laura schlichter May 18, 2019
Bravo Dorothy !